အင်တာဗျူး Archives » Page3of 27 » Myanmar Peace Monitor
“အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့အတွက်က အားလုံးတိုက်ပွဲဝင် နေကြတယ်၊ အသက်တချောင်းစီကို စတေးကြတဲ့အတွက် အားလုံးက လူမျိုး၊ဘာသာ မခွဲဘဲနဲ့ အတူတကွ ဒီတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ် ဒီရေးတော်ပုံ အောင်မှဖြစ်မယ်” ဆလိုင်းဘောရစ် (CDF ပြောခွင့်ရှိသူ)
Chinland Defense Force (CDF) ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းဘောရစ်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ၈ မေ ၂၀၂၁ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့က တပ်မတော်ကနေ အရပ်သားအစိုးရထံ မတရားအာဏာသိမ်း လိုက်ပြီးနောက် ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖေဖော်ထုတ်သူတွေ၊ CDM မှာ ပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို နည်းမျိူးစုံနဲ့ စစ်ဆေးမေးမြန်းဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ဆာင်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ်(၉) မြို့နယ် နဲ့ ပြည်နယ်ပြင်ပက ချင်းအမျိူးသားတွေက Chinland Defense Force (CDF) ကို ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့က ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
“စစ်အာဏာ သိမ်းတာကိုတော့ ကျနော့်အနေနဲ့ မကြိုက်ဘူး၊ ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတော့ နည်းလမ်းရှာနေတုန်းပဲ” ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူ (BGF ၊ ကရင်ပြည်နယ်)
ကရင်ပြည်နယ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနှင့် အမေးအဖြေ ၈ မေ ၂၀၂၁ KNLA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဘောကျော်ဟဲ၏ ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး အားပေးတိုက်တွန်းမှု နှင့် လက်ရှိဖာပွန်ဒေသအတွင်း နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF တပ်အင်အား တိုးချဲ့မှုအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်ပြည်နယ်၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။
“We protest through holding only papers to demonstrate our feelings. They however used weapons. I feel this is unfair. It seems anything can be done with weapons.” CDM Teacher (Temporary – Mizoram State)
Interview with one CDM teacher evaded to Mizoram State 21 April 2021 Ma Wuttyi Soe (Unreal name) isaprimary school teacher in the village of Hpa-An Township, Karen State. She also served asapoll-station chief in the general election held in 2020 November 8. Disappointed upon the outcome of 2020 election, the military […]
Interview with the spokesperson of KNU/KNLA Brigade530 April 2021 Karen National Union (KNU/KNLA) Brigade5Mutraw (Hpapun) District, which is fighting violently with military junta, expressedawarm welcome to the Interim National Unity Government (NUG). Likewise, the public, politicians, activists and various ethnic armed organizations also warmly acknowledged upon the legitimate announcement […]
KNLA တပ်မဟာ(၅) ပြောခွင့်ရ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စောကလယ်ဒို့ နှင့် အမေးအဖြေ ၃ မေ ၂၀၂၁ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအချင်းချင်း ဘုံရန်သူကို တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းရေးအတွက် ပူးပေါင်းကြရန် KNU/KNLA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်က တိုက်တွန်းဆော်သြခဲ့ပါတယ်။ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KNLA တပ်မဟာ(၅)ဟာ သောလယ်ထ အခြေစိုက် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ တပ်စခန်းကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် နယ်မြေအတွင်း နှစ်ဖက်တင်းမာမှုတွေ ရှိလာပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လက်အောက်ခံ BGFကို အသုံးပြုကာ စစ်ရေးပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ မြေပြင်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တပ်မဟာ(၅) ပြောခွင့်ရ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး စောကလယ်ဒို့ နှင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
KIO / KIA သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ၃ မေ ၂၀၂၁ မေလ ၃ ရက်နေ့ (ယနေ့)တွင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်၏ လေယာဉ်တစ်စီး ပစ်ချခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်၊ မိုးမောက်မြို့နယ်အတွင်းက တိုက်ပွဲအခြေအနေများ၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း အာဏာသိမ်း ပြီးနောက် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲအခြေ အနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO/KIA) သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး နော်ဘူ ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားသည်။
ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP) အတွင်းရေးမှူး – ၂ နှင့် အမေးအဖြေ ၂ မေ ၂၀၂၁ ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့ ဖရူဆိုမြို့မှာ စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့ ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ လူငယ် (၇၀)ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ(KNPP) ရဲ့ အတွင်းရေးမှူး-၂ ခူးဒယ်နီရယ်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“CDM အတွက် ကျနော်တို့ဌာန ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲထားပါတယ်၊ CDM တွေ မကဘူး၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည် တွေအတွက်လဲ ဘတ်ဂျက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးလဲ ရှိပါတယ်” မင်းဇေယျာဦး (ဒုဝန်ကြီး၊ အမျိုး သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ)
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) စီမံ၊ ဘဏ္ဍာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဒုဝန်ကြီးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၁ ဧပြီလ ၁၆ရက်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှ အနိုင်ရပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် စုဖွဲ့ထားသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH)မှ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)ကို ဝန်ကြီးဌာန ၁၁ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး (၁၀)ဦး၊ ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၁၂ဦးတို့ကို ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မင်းဇေယျာဦးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါသည်။ မေး – ပထမဆုံးသိလိုတာက မွန်တိုင်းရင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာ ဘယ်လိုနဲ့ ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့သလဲပေါ့။ ဖြေ- ကျနော် ဒီ NUG အစိုးရမှာ ပါဝင်တယ်ဆိုတာက မွန်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုတစ်ခုကနေ နိုင်ငံရေး လမ်းကြောင်းသစ် ဖော်တာဆိုတော့ […]